पोखरामा पहीरोमा परी बाचेका ९ बर्षीय बालक के भन्छन ? बुवा आमा भाइलाई पहीरोले लग्यो, अस्पताल पुग्दा (हेर्नुहोस भिडियो) – Dailny NpNews
पोखरामा पहीरोमा परी बाचेका ९ बर्षीय बालक के भन्छन ? बुवा आमा भाइलाई पहीरोले लग्यो, अस्पताल पुग्दा (हेर्नुहोस भिडियो)
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २०, २०७८ समय: ११:२०:२६
यो पनि पढ्नुहोस ,,,घर होस् वा मन्दिर, बत्ति बाल्दा सधै ध्यान दिनुहोस् यी ५ कुरा, नत्र हुनेछ अशुभ
एजेन्सी । हिन्दू संस्कार अनुसार हरेक घरमा पुजा पाठ गरिने गरिन्छ। पुजा पाठ गर्नु परम्परागत नियम हो। शास्त्रमा पुजा पाठ गर्ने समयमा केही नियम बनाइएको छ।ती नियमको पालना गर्दा चमत्कारी फल प्राप्त हुने गर्दछ। सधै पुजा पाठ गर्ने व्यक्तिलाई पनि यस्ता नियमका बारेमा थाहा नहुन सक्छ। ती नियमको पालना नगरेकै कारण उनीहरुलाई पुजाको फल प्राप्त नभएको हुनसक्छ।
तपाई पुजा गर्ने समयमा दिप अवश्यक बाल्ने गर्नु भएको हुनसक्छ। हिन्दू संस्कार अनुसार पुजामा दिप बाल्नु अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। दिप बाल्दा घरमा नकारात्मक उर्जा न’ष्ट हुने र सकारात्मक उर्जाले प्रवेस गर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। दिप बाल्दा देवी देवता पनि प्रसन्न हुने र सबै नराम्रो शक्ति हटेर जाने विश्वास गरिदै आइएको छ।तपाई हरेक दिन घरमा पुजा गर्दा दिप त बाल्नुहुन्छ तर दिप बाल्ने तरिकाका बारेमा थाहा नहुन सक्छ। जसका कारण तपाईलाई फल प्राप्त हुनुको साटो नोक्सान मिल्ने गर्दछ। त्यसैले आज हामीले तपाईलाई दिप बाल्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
२) यदी तपाई दिप बाल्नुहुन्छ भने यो कुराको ध्यान राख्न चाहियो की पुजामा टुटे फुटेका दिपको प्रयोग नगर्नुहोस्। यसलाई निकै अशुभ मानिने गरिन्छ। तपाईले चुडिएको वा टुटे फुटेको दियो बाल्नुभयो भने यसको परिणाम निकै नराम्रो आउने गर्दछ।३) जब तपाई आफ्नो घरमा दियो बाल्नु हुन्छ भने तपाईले दियोलाई जहिले पनि भगवानको प्रतिमाको अगाडि राख्नुहोस्। भूलेर पनि यता उता दिप नबाल्नुहोस्, यसलाई अशुभ मानिने गरिन्छ।
४) यदी तपाई आफ्नो घरमा पुजा गरिरहनु भएको छ भने जब सम्म पुजा सम्पन्न हुदैन् तबसम्म दियोलाई निभ्न दिनु हुँदैन्। यसलाई अशुभ मानिने गरिन्छ।५) यदी तपाई घयूको दियो बाल्नुहुन्छ भने त्यसमा सेतो रंगको कपास प्रयोग गर्नुहोस् र तेलको दियो बाल्नुहुन्छ भने बत्तिलाई रातो बनाएर बाल्नुहोस्। यसलाई निकै शुभ मानिने गरिन्छ।